Muwaadiniinta EU oo gudaha Schengen lagu baari doono - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Muwaadiniinta EU oo gudaha Schengen lagu baari doono
La daabacay onsdag 10 maj 2017 kl 13.15
Is-badal la waafajineyo xeerka EU
Patrik Engström, madaxa ciidanka xuduudaha qaranka. sawir: Jonas Ekströmer/TT
Dawladda Sweden ayaa ku talo jirta baaris ka adag inay ku soo rogto muwaadiniinta EU ee u soo socdaala dalka Sweden, kuwaasina oo ka soo baqoola waddammo ka bax-san kuwa ku bahoobey heshiiska Schengen. Waxaa rakaabkaa lagu khasbi doonaa in faro iyo sawirro laga qaado.
Waxaa loola jeedaa in baaris lagu sameeyo war-bixinta dijitalka ee ku sugan baasaboorrada waddammada EU, waxa agu magacaabo biometrin. Sida la og-soon yahay waxaa baasaboorrada EU ku keeyd-san sawirka faraha iyo qaab dhismeedka wejiga, sidaa daraadeed iyada oo la isticmaaleyo aalado khaas ah in baaris lagu sameeyn karo xogta baasaboorka ku keeyd-san iyo cidda baasaboorka wadata.
Sida xeerku maanta qorayo in baaris noocaasi ah lagu sameeyn karo oo keliya muwaadiniinta aan u dhalan waddammada EU iyo nawaaxiga Schengen.
– Sidoo kale waxaa baaris sahlan lagu sameeyn doonaa muwaadiniinta EU. Sawirka wejigooda iyo midka farahooda ee baasaboorka ku sugan, middaasina oo la isu barbar-dhigi doono , sida uu sheegay Patrik Engström, madaxa ciidanka xuduudda ee qaranka.
Is-bedel ku saleey-san xeerka EU.
Nidaamka ayaa maanta ka jira garoomo ku yaala Yurub. Tusaale ahaan magaalada London, oo cidda Sweden ka baqoosha la marsiiyo kontrool kaamero akhrinaysa xogta faraha iyo qaabka wejiga.
Patrik Engström ayaa soo dhoweeynaya is-bedelka isagoona sheegay inay ka sahlanaan doonto sidii lagu ogaan lahaa cidda wadata dokumenti aanay iyadu lahayn, sida uu sheegay waxa lagu magacaabo look-a-like-pass.
– Waa hab aad ugu wanaag-san sidii lagu ogaan lhaa suuqa madow ee isticmaalka baasaboorrada. Waxaa suurtagl noqonaysa in cidda dokumentiga sidataa ay tahay, midda sharciga u leh ee la siiyey, sida uu sheegay.
Fikirka xeerkan oo iminka ku maqan hayadaha ku shaqada leh sidii ey uga soo fikir bixin lahaayeen ayaa lagu soo jeediyey in sawirrada faraha iyo qaabka wejigaba la xooro oo aan la keeydin baarista dabadeed.
Goorta uu xaarkani hirgeli doono ayaan weli la xaqiijin, maadaama loo baahan yahay aaladihii teknikada ee ciidanka garoommadu ey istcmaali lahaayeen.